Haweeney dhimasha lagu tiriyey oo iyadoo nool tallaagadda meydka laga soo saaray - BBC News Somali
Haweeney dhimasha lagu tiriyey oo iyadoo nool tallaagadda meydka laga soo saaray
Image caption Waa qariidad muujineyso Carletonville Koonfur Afrika
Haweeney Koonfur Afrika u dhalatay oo loo maleeyey iney dhimatay ayaa tallaajad meydka lagu hayo ee Isbitaalka laga soo saaray iyada oo nool.
Haweeneyda ayaa laga soo qaaday Carletonville, waxaana la geeyey gobolka Gauteng ayaa lagu tiriyey iney dhimatay kaddib marki ay shil gashay.
Bogga TimesLive ee Koonfur Afrika oo shirkaddi lahayd ambalaaska u warrantay ayaa waxay sheegtay in haweeneyda xilliga ay qaadayeen oo ay geynayeen qaybta meydka ee Isbitaalka ay ka muuqan wax astaan ah oo muujinaya iney nooshahay.
Balse marki ay shaqaalaha tallaagadda meydka ka shaqeeya ay damceen iney hubiyaan meydadka tallaajadda ku jiray waxay la kulmeen haweeneyda oo neefsaneyso.
Mas'uuliyiin ayaa waxay BBC u xaqiijiyeen haweeneydu iney nooashahay haddana lagu daweynayo Isbitaal kaddib marki ay booliska forensiga u gudbiyeen.
Waxay Shabakadda TimesLive ay u sheegeen iney arrintan dhicin balse shaqaalahooda gurmadka degdegga ah bixiyo ay tababar wanaagsan laheen sidaana ay arrintan ku dhacday.
Mr Bradnick wuxuu TimesSelect uu u sheegay haweeneyda iney ka mid tahay dad badan oo shil gaari ku waxyeelloobay oo ay laba qofna ku dhinteen 24-ki June.
Dhacdadani ma aha tii ugu horreysay oo isla sanadkan gudahiisa waxaa dhacday nin inuu meyd yahay loo iclaamiyey oo kacay lugahiisana ku socday.
Bishi January maxbuus ku jiray xabsiga Asturias ee gobolka Spain oo saacado suuxsanaa iyada oo weliba jirkiisa la jeexay si loo hubiyo inuu nool yahay iyo inkale, seddex dhakhtar ayaa waxay isku raaceen inuu ninkan dhintay.
Ma aha marki ugu horreysay oo ay arrin noocani ah ay ka dhacdo Koonfur Afrika. Toddoba sano ka hor oday 50 jir ahaa oo lagu tiriyey inuu dhintay ayaa kacay isaga oo weliba qaylinaya. 2016, nin uu shil gaari ku dhacay oo laga keenay gobolka Kwazulu Natal ayaa la iclaamiyey inuu dhintay balse maalinti labaad inta aan la aasin ayaa la arkay ninki wuu dhintay la yiri oo neefsanaya.
Wuxuuse si dhab ah uu u dhintay 5 saacadood kaddib marki uu soo kacay.
Muuqaal Femicide in South Africa: Three women killed every day
17 Juunyo 2018